NgoNovemba 2019 - Iphepha le-2 le-14 - Funda ukuRhweba
Inyanga: Novemba 2019
U-Ripple (XRP) Uhlalutyo lwamaxabiso-i-XRP iqhume kwiinyanga ezintandathu ezantsi, ngokuthe ngcembe uzuze amandla
I-Ripple (i-XRP) ibuyela kancinci kwiinyanga ezintandathu eziphantsi kwe- $ 0.20 kwiintsuku ezintathu zokugqibela zokuthengisa. Okwangoku, imarike ilungisa inzuzo malunga ne-2.63. Nangona i-bias yexesha elide ihlala ibalasele njengoko kukho ithemba lokutshintsha ukuba iinkunzi zeenkomo zinokuphinda ziphinde zikwazi ukumelana ne- $ 0.30. Nangona kunjalo, uxinzelelo lokuthenga olubuthathaka lusagcina isantya sokunyuka kancinci.
Uhlalutyo lwamaxabiso eRipple (XRP): Itshathi yemihla ngemihla-Ukuthwala
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 0.25, $ 0.30
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.20, $ 0.18
Ekupheleni kuka-Okthobha, siyibonile indlela iRipple (XRP) eyikhuphe ngayo imida yejelo lonke ukuya kumda ophezulu wejelo kule nyanga. Njengoko sibona ngoku, imeko efanayo ngoku iyadlala kwimarike emva kokubuyiswa kukaNovemba 25 kwi-0.20 yeedola yenkxaso. I-XRP ngoku ibuyela umva ngokuchasene ne- $ 0.25. Iinkunzi zeenkomo zinokuphinda zifumane i-0.30 yeedola xa uxhathiso oluphambili lusaphuka.
XRPUSD, Itshathi yemihla ngemihla-Novemba 28
Ukujonga kwimarike, siyabona ukuba i-XRP iyabuyela umva kwisalathiso se-RSI kodwa ukwakheka kwe-bullish akukacaci. Kukho isidingo sonyuko olubonakalayo ngaphezulu kwenqanaba le-RSI elingaphezulu. Kwelinye icala, i-MACD ibonisa ukuba isenzo se-bearish sisalawula. Kwimeko yokuhlangana kwe-bearish, intengiso inokubuyela umva kwisiseko sejelo kwi $ 0.2. Ikhefu elincinci lingathumela ixabiso leXRP kwi- $ 0.18.
U-Ripple (XRP) Uhlalutyo lwamaxabiso: Itshathi yeYure-Bullish
Itshathi yeyure ye-Xipp ye-Ripple iphakamisa intshukumo ephezulu okwangoku ebumba ngaphakathi kwendlela yokunyuka komtshato. Kwangoko namhlanje, i-XRP ichukumise umda ophezulu wedge kodwa ngoku kubonakala ngathi amaxabiso entengo ayaqhubeka. Kukho inkxaso ekufutshane ne- $ 0.22 kumda wedge osezantsi ngaphambi kokuqalisa kwakhona. Ngaphantsi kwe-wedge, inkxaso ikwi- $ 0.207.
XRPUSD, itshathi ngeyure-Novemba 28
Kwicala elingasentla, i-XRP okwangoku ibambe ukunganyangeki kwe- $ 0.231, apho ukuxhathisa kwejelo kulele khona. Ukufumana amanye amaxabiso kunokuzisa intengiso yeXRP ngaphandle komda ukuya kwi- $ 0.24 kunye ne- $ 0.25 yokuchasana. Okwangoku, i-RSI ngoku ihleli kumanqanaba angama-50. Uxinzelelo olunzulu lokuthenga luya kwenzeka ukuba inqanaba le-RSI linokuqinisa njengenkxaso. Njengoko kucetyisiwe kwi-MACD yeyure, iinkunzi ze-XRP zifumana ulawulo lweemarike esinokulindela ukunyuka okuqinisekileyo kurhwebo oluzayo.
XRP THENGA UMQONDISO
Thenga ukungena: $ 0.22
I-TP: $ 0.24
SL: $ 0.21
tags Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical, XRP
Amanqaku eSterling aqinisekileyo ngokulandela uqikelelo lwee-Conservatives Wins e-UK Dec 12 Unyulo
Ukuhlaziywa: 28 Novemba 2019
Kumaxesha akutshanje, i-UK geopolitics iye yenza izihloko eziphambili kwiakhawunti yeBrexit. Imbali kaBrexit yomhla kaJuni wama-23, ngo-2016 apho iipesenti ezingama-52 zokuvota zavotelwa kwi-referendum yayixhasa ukuphuma kwe-Bhritane kwi-European Union.
I-Brexit eyayicwangciselwe ukuba ivele nge-29 ka-Matshi ngo-2019, kodwa emva kokwaliwa yipalamente yatyhalelwa ngomhla wama-31 ku-Okthobha ka-2019. Emva komnye umjikelo wokwaliwa, ulwandiso lweBrexit ekugqibeleni lwatshintshelwa kumhla wama-31 kuJanuwari 2020.
Ukongezwa kuza emva kokuba ipalamente ingasamkelanga isivumelwano esitsha seBrexit. U-Boris Johnson, Inkulumbuso yase-United Kingdom, emva koko wacinezela unyulo lwakwangoko. Unyulo lukaDisemba 12 oluza kubanjwa ngaphambili lwaluthetha ithemba lokuphumelela izihlalo ezilondolozayo, kusenza isivumelwano malunga neBrexit kube lula kakhulu ukusamkela.
Iinkokheli ezahlukeneyo zemibutho yezopolitiko ziye zenziwa udliwanondlebe kunye novoto olubonisa izimvo nezinto ezithandwa ngabantu. Umzekelo wezo polls yivoti ye-YouGov. Emuva ngo-2017, uphononongo lwe-YouGov lwalukufuphi ngokuchanekileyo ngokugqibeleleyo nangona kwakubonakala ngathi "yinto engaqhelekanga" ekuqaleni.
Uvoto lwe-YouGov olwenzelwe i-Times luqikelele ukuba ukuba unyulo beluza kubanjwa ngoku, i-Conservatives kunye nezaBasebenzi ziya kuphumelela i-359 kunye ne-211 ngokwahlukeneyo, i-Scottish National Party 43 kunye ne-Liberal Democrats 13. Olu lukhulu ekuphumeleleni kwabo balondolozayo.
Ekuvukeni kweendaba, iPound ijikeleze phezulu ngoLwesine ukuya kwi- $ 1.2945 ukusuka kwixabiso langaphambili lentengiso le- $ 1.2920 eyi-0.2% yokunyuka, ngenzuzo yentengiso ye-0.1625%.
Uhlalutyo uqhubeka nokuqikelela amanyathelo alandelayo athi ukuba i-YouGov yenze iiseyile, isivumelwano seBrexit siza kudlula phambi kukaDisemba 25 ngaphandle kokungaboni, i-20 kaDisemba sele iphakanyisiwe njengosuku lokuvota, ubona iBrexit ihlangana nomhla wokugqibela kaJanuwari 31.
Okwangoku, ikamva le-FTSE 100 libonakalise ukuqala kobuthakathaka kwizitokhwe zaseLondon, njengoko i-China isabele ngomsindo kwiindaba zokuba uMongameli uDonald Trump utyikitye umthetho oxhasa abaqhankqalazi baseHong Kong. Oko kubangele inkxalabo yokuba uthethathethwano lwezorhwebo lunokuba nzima ngakumbi.
Iholide yombulelo e-US kulindeleke ukuba igcine inani lokuthengisa licocekile kwintengiso yezemali.
I-Ethereum (i-ETH) inokuhla ngexabiso ukuba ijongene nokuchaswa kwexabiso kwi-155 yeedola
Inqanaba lokumelana eliphambilis: $ 220, $ 240, $ 260
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 150, $ 130, $ 110
I-ETH / i-USD yexesha elide iTrend: Bullish
Kutshanje, u-Ethereum wayenoxinzelelo lokuthengisa njengoko iibhere zaphula umgca odibeneyo (imigca eluhlaza okwesibhakabhaka) kwi-150 yeedola kwaye ixabiso lawela ezantsi kwi-135 yeedola. Emva kokuba ingqekembe iwile, intengiso ibuyile umva kodwa i-ETH ngoku ijongene nokuchasana ne- $ 155. Ekubuyiseleni emva, emva kwempembelelo yokugqibela ye-bearish ngoSeptemba,
U-Ethereum wayekwihambo elihamba phakathi kwamanqanaba e-150 kunye ne-200 yeedola. Inqanaba lexabiso le- $ 150 lalinenkxaso eyomeleleyo ngaphambi kokuba yaphulwe ngoNovemba. Inkxaso ngoku ukuxhathisa ngoNovemba. I-Ethereum ayinakulindeleka ukuba inyuke ngenxa yeli nqanaba lokumelana. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula ukungangqinelani, ingqekembe iya kujongana nenye intengiso.
Ukwehla kwexabiso kwakutshanje kwaphuka ngezantsi komgca wedowndrend kodwa watsala umva ngaphezulu kwayo. Oku kubonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zisalawula amaxabiso kodwa ngoku zijamelene nokumelana ne- $ 155. Nangona kunjalo, ukuba ingqekembe ijongane nokunye ukuthengisa kunye nomgca we-downtrend kunye nomgca wenkxaso wophukile, u-Ethereum uya kuphinda aqhubeke nokuhamba. I-stochastic ibonisa iimpawu zokukhula ngamandla kodwa ixabiso likummandla ogqithileyo.
I-ETH / i-USD yexesha eliphakathi kwi-bias: Bullish
Ngo-Novemba, u-Ethereum wayeguquguquka phakathi kwamanqanaba eedola ezili-180 kunye ne-197 yeedola kodwa iinkunzi zeenkomo zasilela ukwaphula uxhathiso kwi- $ 197. Ukungakwazi kweenkunzi kukhokelele kwinto eya ezantsi. Imakethi yehla kwaye yaphula i-150 yeedola zangaphambili kwaye yenze enye iphantsi ye- $ 135. Imakethi inyukile kwakhona kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba lexabiso langoku.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihamba zisiya ngasemazantsi zibonisa ukuba intengiso isekhona kwi-bearish. Ixesha le-RSI kwinqanaba le-14 kwinqanaba lama-51 libonisa ukuba ixabiso lingaphezulu komgangatho ophakathi 50. Oku kubonisa ukuba i-Ethereum iyenyuka
Umbono ngokubanzi we-ETH
Umkhwa opheleleyo we-Ethereum yi-bearish. I-ETH ithengisa ngaphantsi kokumelana ne- $ 155. I-Ethereum inokuqhubekeka ukwehla ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula uxinzelelo kwi-155 yeedola. Oku kuya kukhokelela ekutyibilikeni phantsi kwengqekembe iye kwizantsi elidlulileyo. Ngaphandle koko, ingqekembe iya kutshintsha phakathi kwamanqanaba e-135 kunye ne- $ 155.
Umqondiso woRhwebo lwe-ETH
Umyalelo: Thenga umda
Ixabiso lokungena: $ 140
Yeka: $ 125
Ithagethi: $ 180
tags ETH, Ethereum, ETHUSD, Uhlalutyo lwamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kwakhona Ngaba iSilayidi se-BTC sibuyele kwi- $ 7200
I-Bitcoin irekhoda phezulu ngeveki kwi-7600 yeedola kulandela ukonyuka kwamaxabiso kwakutshanje okuvumela abathengi ukuba boyise inkxaso ye-7400 yokuxhathisa. I-BTC okwangoku ilungisa inzuzo ye-5.12% emva kokubona ukungazinzi okukhulu kunye nevolumu phantsi kweeyure ezingama-24. Kukho intshukumo ethe kratya yeBitcoin ukuba abathengi banokuhlala bekhuthele kwintengiso. Nangona kunjalo, ixabiso lingawela kwi-7200 yeedola ngaphambi kokufaka i-refuel kwirally elandelayo ye-bullish.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi yansuku zonke-iBullish
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7800, $ 8000
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 7400, $ 7200
Emva kokuseka inkxaso kwi-6600 yeedola nango-25 kuNovemba, iBitcoin ngoku ibuyela umva kancinci kurhwebo lwangaphakathi. Ukuhamba okungxamisekileyo okunyanzeliswayo kunyuselwa kumthamo ophantsi, nangona ukunyuka ngokuthe ngcembe kufanele kulindelwe ukuya kwi- $ 9000 kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Okwangoku, isalathiso se-RSI ngoku siyishiyile indawo ethe kratya. Ukuhamba okunyukayo kunokuba namandla xa iBitcoin inyuka ngaphezulu kwenqanaba le-RSI 50.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-Novemba 28
Okwangoku, i-BTC elandelayo ekujolise kuyo ngu- $ 7800, nangona i-8000 yeedola inokulandela kurhwebo lwexesha elizayo. Kwangelo xesha, sinokubona ulungiso olusezantsi lokuxhasa kufutshane ne- $ 7400 kunye ne- $ 7200. Kwi-MACD yemihla ngemihla, imarike ye-BTC isekwindawo ye-bearish. I-crossover elungileyo iya kunika amandla kuxinzelelo lokuthenga kwintengiso.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-30M-Bullish
Okona kutshanje kuye kwenza ukuba iBitcoin ichukumise umda ongaphezulu wejelo elenzayo kwimizuzu engama-30. Njengoko sibona, kubonakala ngathi iBitcoin isenokuphinda ibuyele kumda osezantsi wejelo kungekudala. Ngale nto, imakethi inokuthi iwele kwi-7400 yeedola, i-7300 yeedola kunye ne-7200 yeedola ngaphambi kokuba iphinde iqhubeke. Nangona kunjalo, ukuba intengiso ihamba ngenye indlela ejikelezayo, ukuqhubeka okuqhubayo kunokuba kunokwenzeka ukuba kwenzeke.
Itshati ye-BTCUSD, 30M-Novemba 28
Inqanaba elilandelayo lokuchasana nokujonga yi- $ 7700, $ 7800 kunye ne- $ 7900. Okubaluleke ngakumbi, ukuba iBitcoin ingafumana inkxaso kwinqanaba le-MACD zero, umdlalo wokuqhubela phambili uya kuqinisekiswa. Ngaphezulu kwayo yonke le nto, iBitcoin ngoku ihleli kwi-RSI mid-band, ijonge phezulu. Ingadlala ukuba inqanaba le-RSI linokubamba
YOKUTHENGISA UMqondiso BITCOIN
Thengisa ungeniso: $ 7549
I-TP: $ 7422 / $ 7244
tags uhlalutyo, BTC, Ukubikezela
I-Gold Regains njenge-Risk Appetite Spurs phakathi kweNtetho yeNtetho yeThemba
Ukuhlaziywa: 27 Novemba 2019
Ngokukhawuleza emva kweentsuku ezimbini emva kokuba isinyithi esikhuselekileyo sichukumise i-2 ngeveki ephantsi ngenxa yenkqubela phambili eyenziweyo kwiintetho zorhwebo phakathi koqoqosho oluphezulu, i-US ne China, iGolide iya ibuya ibambe amandla njengoko ithengiswa nge $ 1,459.10 ngeyunce ngokuchasene nexabiso langoLwesibini odlulileyo $ 1,450.30 yeedola.
Kwangoko evekini, iingxoxo zorhwebo phakathi kwala mazwe mabini zibonakala ngathi zihambile phambili. Imeko yentengiso ibisengozini njengoko inkqubela ebonakalayo kwiintetho zorhwebo inyusa umngcipheko wokutya, inyusa idola kunye nezinye izinto ezinobungozi. Kubonakala ngathi kukho ubudlelwane obungenakuphikiswa kwiminqweno yeendawo ezikhuselekileyo ezinjengeJapan Yen kunye neGolide kunye neeasethi ezinobungozi njengoko umntu ethanda ukulinganisela.
Isinyithi esikhuselekileyo sihlala sibhenela kumaxesha okungaqiniseki kwezopolitiko nakwezoqoqosho esiwa phantsi malunga nomngcipheko wokutya, ngelixa idola kunye nezinye izinto ezinobungozi zathengiswa kwiveki ezimbini eziphakamileyo.
Umsebenzi wentengiso kwiGolide namhlanje ubonakalisa ukwehla okuncinci okunokuthi kubonwe njengokudityaniswa kweenzuzo kuqatshelwe umhlalutyi oye waqaphela umngcipheko wokutya kwimarike.
Indawo yegolide ime kwi -0.1% yokuthengisa nge-1,459.10 yeedola ngeyunce. Ikamva legolide laseMelika limi kwi-0.1% ukurhweba nge- $ 1,459.20.
Kwakukho imiqondiso yokwehla kwenqanaba lokurhweba kwiinyanga ezili-16 ubudala xa uMongameli uTrump wenza isibhengezo kwangoko kwiveki yesivumelwano sokuqala ekufikelelwe kuso phakathi kwala mazwe mabini. Nangona ithemba liye langena, ngenxa yoko, kusekho isilumkiso kwimarike evela kwintelekelelo yokuba iibhili zaseMelika zamva nje ezidlulise i-Hong Kong zinokubangela inkqubela phambili kwintetho yorhwebo.
Inkxaso ebalulekileyo yexabiso legolide limi kwi- $ 1445 ngeyunce ngelixa uxhathiso lobuchwephesha limi kwi- $ 1480. Isinyithi esikhuselekileyo sisatyibilika phakathi kwala manqanaba. Ukuba ixabiso liwela phantsi kwenkxaso ebaluleke kakhulu, inokuba sisizathu sokukhathazeka njengoko isinyithi esikhuselekileyo sisaza kuqubuda kwiindawo zentengiso zichaze umhlalutyi ophezulu.
tags igolide, Intengiso yase-US-China yoRhwebo
Imvakalelo kwi-GBPJPY ijika i-Bias esecaleni njengoko ijonge ukuResist Resistance kwinqanaba kwi-141.50
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Novemba 27
Ngokuchasene nephawundi entle, i-yen yaseJapan isandula ukuhlangabezana nokwehla kwesikhundla sayo somnatha. Oku kwatyhala ngokufutshane imbonakalo ye-GBPJPY Sentiment ukomeleza indawo yabathengi. Kananjalo, indibaniselwano yoluvo lwangoku kunye notshintsho lwamva nje lusinika umahluko okhoyo kurhwebo lwe-GBPJPY.
Amanqanaba okumelana: 148.66, 146.57, 141.57
Amanqanaba enkxaso: 135.49, 130.44, 126.54
Ngokubanzi, ipatheni yokudityaniswa kwenqanaba kwi-126.54 (esezantsi) isaqhubeka, ngokunyuka kwe-130.44 njengokuqinisa ngakumbi. Ukuqhubela phambili kulindeleke ukuba kujikeleze indawo yokumelana kwinqanaba kwi-146.57 / 148.66.
Ukuza kuthi ga ngoku, silindele ukuxhathisa okuqinileyo ukusuka apho ukunciphisa umda kwangaphambili. Ukuya kwicala elisezantsi, ukuqina okuzinzileyo kwenqanaba kwi-135.49 inokucebisa ukuba oku kubuyela umva kugqityiwe. Nangona ukuntywiliselwa okungaphezulu kunokuphinda kufumaneke ukubuyisela inqanaba kwi-126.54 esezantsi.
I-GBPJPY iTrend yexesha elifutshane: Bullish
I-GBPJPY ihlala idityanisiwe ukusuka kwinqanaba le-141.57 kunye ne-intra-day bias ihlala ingathathi cala okokuqala. Kwicala elisezantsi, ukuqhawuka kwenqanaba kwi-139.36 kunokwalatha kwinqanaba elifutshane.
Ukuntywila kwakhona kunokuphinda kufumaneke kwinqanaba le-135.49, uxhathiso olujikelezayo olugcinwe ekuqaleni. Ukuya kwicala elingasentla, ukuphuma kwinqanaba kwi-141.57 kungachola, ukusuka kwinqanaba elikwi-126.54 ukuya kwinqanaba lokumelana ne-148.66, imbonakalo ihlala ikwimeko entle, ibonisa ukungahambelani okuhle kwixesha elifutshane, eliphakathi nelide.
Ixabiso lokungena: 141.57
tags GBPJPY, Uhlalutyo Technical
IiRekhodi zoTshintshiselwano ngeeDivital zeRekhodi eziValiweyo eziValiweyo eziPhantsi kweeNtengiso zeeyure ezingama-24- Ngaba oku kungayenza inyuke?
Umthamo weBitcoin uburhweba ngaphantsi kweedola ezili-150 zeedola kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo ngenxa yokurhoxiswa kwexabiso okuye kwanyanzelisa ukuhamba kwamaxabiso ngezantsi kwe- $ 7300 ukusukela ngoMvulo. Ngaphandle koko, ulawulo lwe-BTC luqhubekile nokubamba i-66% yesabelo sentengiso iinyanga. Ngeenkcukacha-manani zekhaphethi yentengiso, kubonakala ngathi kukho uphawu lwethemba kwicala leenkunzi njengoko impompo yamaxabiso isenokuba ikhona kwikona ye-cryptocurrency yokuqala.
Ikhontrakthi engapheliyo yekamva leBitcoin yenye into enokubangela ukuba kuqhutyekwe kwintengiso. Ukujonga ivolumu yangoku ye-BTC yevolumu ephantsi kwezobuchwephesha xa kuthelekiswa neenyanga ezimbalwa ezidlulileyo xa i-BTC irekhodishe ukuphakama kwayo ngonyaka malunga ne- $ 13700 ngaphambi kokuba iqale ukuqengqeleka kwinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
Okungakumbi, ukujonga unyaka ophakamileyo we-19900 kunye no-2017, iBitcoin ibonakale ngathi iphazamisa kakhulu. Abahlalutyi abaninzi baye baxela kwangaphambili ukuba isigaba esilandelayo se-bearish sinokutsala ixabiso le-BTC ukuya kwi-5000 yeedola ngelixa abanye bekholelwa ukuba iBitcoin inokuhla nakwi- $ 1000 kwixa elizayo. Nangona kunjalo, ikamva leBitcoin levolthi kubonakala ngathi lonyuke kakhulu kunaniselwano lwezinto ezivela kwiiyure ezingama-24 zokugqibela.
Ukulandela i-tweet ngumhlalutyi wezinto eziphuma kwi-crypto, i-SKEW kwangoko namhlanje, iiyure zokugqibela ze-24 zeeyure zeBitcoin zibonakala ngathi ziyonyuka kunaniselwano oluphambili lwe-crypto:
NjengeBitmex, eyenzeka ukuba ibambe owona mthamo uphezulu umalunga ne- $ 2.41 yezigidigidi; ilandelwe yi-OKEx nge- $ 2.11 yezigidigidi; Iirekhodi zeHuobi zii-1.99 yezigidi zeedola I-Binance ithengisa i-1.28 yezigidigidi zeedola; I-bitFlyer yabona i-0.87 yezigidigidi zeedola; ICoinFlex ibambe i-0.28 yezigidigidi zeedola, iDeribit ye-0.27 yezigidigidi zeedola; I-FTX $ 0.16 yezigidigidi, i-CryptoFacilities $ 0.04 yezigidigidi kunye neBitfinex enexabiso elingabalulekanga.
Impendulo elula kukonyuka kwevolumu yamva nje inokuthi ilandelwe kuqikelelo olunokubangela ukunyuka ngesiquphe kwexabiso lokungazinzi kwexabiso. Ukongeza, esinye isizathu sokwenza oko kunokuba sisenzo soloyiko lokulahleka (FOMO) kwimarike enokuthi ibeye kwikona.
Nangona kunjalo, okoko uhlalutyo lwe-SKEW, intengiso ibone umthamo omkhulu kunye nokungazinzi okwenze ixabiso likaBitcoin ukurekhoda isezantsi leedola ezingama-6880 ngaphambi kokunyuka ukuya kwi-7300 yeedola. I-BTC ngoku ithengisa malunga ne- $ 7300. Ukuba umthamo kunye nokungazinzi kuyaqhubeka nokubaluleka, iBitcoin inokuprinta isezantsi okanye iphakamileyo.
tags Iziphumo zeBitcoin
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -Ukusasazeka kwexesha elifutshane kubeka i-Bitcoin ye-Bullish Swing
Ukulandela intshukumo elungileyo yakutshanje, iBitcoin ibone inzuzo ngokukhawuleza ye-1.77% kwiiyure ezingaphantsi kwesibhozo, isenza urhwebo lwe-BTC kwi-7300 yeedola okwangoku. Kwangoko namhlanje, intengiso yayiphantsi koxinzelelo lwe-bearish kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuthengwa kwamva nje okukhokelele ekuphumeni kwesitishi kwixesha le-15 lemizuzu; I-Bitcoin inokujamelana nokuxhathisa kwe- $ 7400 kwakhona ngaphambi kokuqhubela phambili. Ukuba oku kuxhathisa kuhlala kunzima kwiinkunzi ukuba zigqithe, ixabiso liya kuqhubeka nokujongana nokwaliwa kude kusekwe isiseko esomeleleyo se-bullish.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi yeYure -Ngathathi cala
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7400, $ 7600, $ 7800
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 7200, $ 7000, $ 6800
I-Bitcoin iphantse igqibezela ipateni yentloko kunye negxalaba kwitshathi yeyure. Le patheni uyilo lwentengiso olunokudlala ngalo naliphi na ixesha ukusukela ngoku. Ngeli xesha, ukumelana ne- $ 7400 ebambe i-Bitcoin malunga neentsuku ezimbini kunokuba yinkxaso. Nangona kunjalo, ukuphuma kunganyusa ixabiso le-BTC ukuya kwi- $ 7600 kunye ne- $ 7800 ngaphakathi kokuqhwanyaza kweliso.
Emva kokuchacha kabukhali kumhla ophantsi weedola ezingama-6880, iBitcoin ngoku ihambise inkxaso kwangoko ukuya kwi-7200 yeedola, ilandelwa yi- $ 7000. Ngenxa yokunyuka kwamaxabiso akutshanje, i-Bitcoin ngoku ithengisa ngaphezulu kwe-RSI ye-bullish zone emva kokuhlala inyusa inkxaso kwinqanaba le-30. Nangona kunjalo, iMACD okwangoku ayizukucacisa ngokucacileyo. Ukunyuka umva ngaphezulu kokuchasana kwangoko kufuneka kuqinisekise ukuba i-Bitcoin iyaqhuba ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, i-BTC ayithandabuzi phakathi kwendlela ehamba phambili.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-15M-Bullish
Ukujonga umfanekiso omkhulu, urhwebo lweBitcoin luphumile kwisitrato esihlayo esakha kwimizuzu eli-15 ukusukela izolo, emva kokunyuka kwamaxabiso ngesiquphe ngexesha leseshoni yaseLondon namhlanje. Ukujonga ngokusondeleyo kwitshathi yexabiso kubonisa ukwakheka kweBitcoin. Ukuchukumisa i-7409 yeedola ngosuku, ukuthengwa okulandelayo okujolise kwi-7500 kunye ne-7600 yeedola.
Okwangoku, ukunyuka kwamva nje kukhokelele i-Bitcoin kwindawo ethengiweyo kwisalathiso se-RSI, ngoku izama ukubuyela umva. Ukulinganisa i-MACD, i-Bitcoin ingene kwindawo elungileyo kodwa ilungele ukulungiswa okuncinci okunokubangela ukuba ixabiso libuyele kwi-7200 yeedola ngaphambi kokubuyela umva. Ukuvavanya i-7100 kunye ne-7000 yeedola inkxaso inokuvumela urhwebo lwe-BTC lubuyele ngaphakathi kwipateni yeshaneli. Ukuza kuthi ga ngoku, ukuseta okuqhubayo kuyenza iBitcoin kwimbono yexesha elifutshane.
Thengisa ungeniso: $ 7300
I-TP: $ 7177
tags uhlalutyo, yaqikelelwa, Ukubikezela
I-Stellar (XLM) ephindayo inokujamelana nokuchasana ne- $ 0.080
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.09, $ 0.10, $ 0.11
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.06, $ 0.05, $ 0.04
I-XLM / USD yexesha elide iTrend: Bullish
I-XLM iphelile ukusebenza kwayo kwe-bearish njengoko iinkunzi zeenkomo bezikhusela inkxaso kwi-0.055 yeedola. Namhlanje, uStellar ukwindlela elungileyo yokuphinda abone iindawo eziphezulu zangaphambili. Nge-10 kaNovemba, iinkunzi zazama ukwaphula i-0.080 yokuphikisa ngaphezulu kodwa zagxothwa. Esi sizathu sokuhla kweXLM. Ukuchasana nge-0.080 yeedola kwahlala kungaphazanyiswa ukusukela ngoSeptemba. I-XLM ithengisa nge-0.058 yeedola ngexesha lokubhalwa. Ixabiso liya kuphinda lijongane nokuchasana okuphezulu kodwa kunokujamelana nokuchasana kokuqala kwi- $ 0.065.
I-XLM ikummandla ogqithisileyo we-stochastic yemihla ngemihla kodwa isalathiso senza i-U-turn ngaphezulu kommandla. Oku kuchaza ukuba i-XLM ikwisantya esiphezulu. Kwitshathi, i-1.272 yeFibonacci yokwandiswa kwenqanaba kulapho ingqekembe iya kuthengisa iphinde ibuye umva.
I-XLM / USD I-bias yexesha eliphakathi: Ukuphelisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iibhere zavavanya inkxaso kwi-0.055 yeedola kabini kwaye zabuya zabuya. I-XLM ikukunyukela phezulu ukufikelela kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Ixabiso liphule i-SMA yeentsuku ezingama-21 kwaye lisondela kwi-SMA yeentsuku ezingama-50. Ikhefu elingaphezulu kwee-SMAs liza kwenza i-XLM ibekho kwindawo yokuqhubela phambili. Ingqekembe iza kujongana nokunganyangeki kwi-0.065 yeedola njengoko isondela kwinkcaso ephezulu.
Ixabiso lisondela kumgca wokumelana. Nangona kunjalo, ukuba intshukumo ye-bullish iqhubeka kwaye amaxabiso ayaphula umgca wokumelana, i-XLM iya kuqhubeka nokunyuka. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso lisilele ukwaphula umgca wokumelana, ingqekembe iya kuwa.
Imbonakalo ngokubanzi yeStellar
I-Stellar yenza intshukumo elungileyo kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo. Ingqekembe inesithintelo sokutsiba ngaphezulu kwe- $ 0.080 yokuphikisa ngaphezulu. I-XLM ayinamandla okuthenga kwinqanaba lexabiso eliphezulu njengoko iinkunzi zenkomo zihlala zonganyelwa kukumelana nentloko. Ikhefu kwinqanaba lexabiso le- $ 0.080 liya kuyibona ingqekembe iqale kwakhona.
Umqondiso woRhwebo lweStellar
Isixhobo: XLM / USD
Ixabiso lokungena: $ 0.058
Yeka: $ 0.050
Ithagethi: $ 0.08
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, Stellar, XLM, XLMUSD
Nasi isizathu sokuba iiNguqulelo ezininzi ze-Crypto ziphume kwiShishini
Kudliwanondlebe lwamva nje kunye neForbes Clem Chambers, i-CEO yewebhusayithi yotyalo-mali iADVFN.com, yathi ngexesha lokugqibela lokujonga, bekukho malunga ne-350 yokutshintshiselana nge-crypto, kodwa olu tshintshiselwano luyafa.
CoinExchage.io. ngowona monakalo wakutshanje phakathi kotshintshiselwano. Utshintshiselwano oluwileyo lubhengeze ukuba akunakwenzeka ngokwezoqoqosho ukuqhubeka nokubonelela ngeenkonzo. Utshintshiselwano luchaze ukuba iindleko zokuhambisa inqanaba elifunekayo lokhuseleko ngoku zigqithile kumvuzo wazo kwaye ke akunakwenzeka ukuqhubeka.
Zininzi kakhulu ii-cryptocurrensets kwimarike, kodwa ukuba ususa zonke iithokheni ezisekwe e-Ethereum, ushiyeke uneemali ezincinci ezingama-30 ezinamaxabiso amakhulu. Lilonke, zimalunga ne-150 kuphela ezifanelekileyo. Oku kuthetha ukuba ezi zitshintshi zingama-350 zikhankanywe apha ngasentla zineethokheni ezili-150 nje zokusebenza.
Ukwenza izinto zibe mandundu, kukho ukunyuka koxinzelelo kulawulo lotshintshiselwano kwihlabathi liphela, kusenza ukuba kube nzima kakhulu ukuba utshintshiselwano lokuqalisa lusinde okanye luphumelele.
I-CryptoCompare's Exchange Benchmark
Umnikezeli wedatha weCrypto CryptoCompare, uhlaziye "i-Exchange Benchmark" yayo, ebone iBinance (indawo yesibini ngobukhulu yokutshintshiselana nge-crypto) iphuma kwindawo yokutshintshiselana ephezulu ye-10. Olu tshintshiselwano lwabekwa kwinqanaba lesi-7 ukusukela ngoJuni kulo nyaka.
Okwangoku, lo ngumyalelo wotshintshiselwano oluphezulu lwe-10:
I-2- Paxos 'itBit
I-Binance ngoku ibekwe kwindawo ye-12 kulandela isiganeko sokuqhekeka. I-CryptoCompare ichaze ukuba iBenchmark entsha inecandelo elibonisa ukutshintshiselana ngokusekwe kwimicimbi yezokhuseleko enje ngehacks.
U-Binance wayelixhoba lokuqhekeka okukhulu okwenzeka ngomhla we-7 kaMeyi kulo nyaka, owathi wabona abagcini besenza malunga ne-7,000 yeBitcoin, exabisa malunga ne-42 yezigidi zeedola ngexesha lokuqhekeka.
I-CryptoCompare yongeze ukuba ikhuphe iBenchmark yoTshintshiselwano kulandela izikhalazo zokuba malunga ne-95% yevolumu kutshintshiselwano olungalawulwayo yenziwa. Oku ngokungathandabuzekiyo kuya kupela intshabalalo yotshintshiselwano oluninzi lwe-crypto.
tags I-CryptoCompare, Utshintshiselwano ngexabiso lemali
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 14 abaDala izithuba →